Mambokadzi Anoda Clive Scott, iyo GM yeSofitel Melbourne
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mambokadzi Anoda Clive Scott, iyo GM yeSofitel Melbourne
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Rarama mambokadzi! Mambokadzi Elizabeth II vakaremekedza maAustralia anosvika zana nemakumi mapfumbamwe nekuzvarwa kwake. Mambokadzi haasi iye chete mutungamiri weHurumende kuUnited Kingdom, asiwo kuAustralia, Canada nedzimwe nyika gumi nenomwe dzeCommonwealth.
Nhengo inodada paQueens rukudzo runyorwa inhengo yeAustralia indasitiri yekugamuchira vaeni uye General Manager weboka reAccor hotera.
IFrench Hotel Boka ACCOR inofara uye inoda kuti nyika izive, kuti yavo yega yakagamuchirwa kwete nemumwe kunze kweMambokadzi.
Clive Scott, Accor's General Manager weSofitel Melbourne On Collins, akatumidzwa zita regore rino reQueen's Birthday Honors List senhengo yeOrder yeAustralia (AM).
Rukudzo rwakapihwa vanogamuchira 252 chete muna 2021, naVaScott vakasarudzwa nekuda kwebasa ravo rakakosha kumahotera ehotera uye nehunyanzvi.
Clive Scott akatsaurira anopfuura makore makumi mashanu nemashanu kune indasitiri yekugamuchira vaeni. Kwemakore makumi maviri nematanhatu apfuura, VaScott vakabata akasiyana makiyi ehutungamiriri mabasa neAccor mune zvevashandi uye mashandiro muAustralia. VaScott vanga vari General Manager weSofitel Melbourne On Collins kwemakore gumi nematanhatu apfuura, zvichimuita mumwe wevatungamiriri vemahotera kwenguva refu muMelbourne. Iye zvakare ari Sachigaro weVashanyi Ehupfumi Taskforce yeKomiti yeMelbourne.
VaScott vakati: "Ini ndakaninipiswa nemubairo uyu uye ndinovimba zvandinoedza mumakore apfuura zvakatsigira maartist emarudzi ese kuti azadzise mabasa avo ehunyanzvi.. Basa rangu muhunyanzvi uye kugamuchira vaenzi ranga richizadzikisa zvakanyanya kwandiri uye ndinovimba ndinogona kuita zvakawanda mune ramangwana. ”
Accor Pacific CEO, Simon McGrath AM, akati: "Ndinodada zvisingaite kuona Clive Scott achizivikanwa pakati pekambani inoremekedzwa zvakadaro muQueen's Birthday Honors List. "Clive akazvipira kusimudzira mukurumbira uye kusimudzira kushanya uye hunyanzvi muAustralia uye rukudzo uku kucherechedzwa kukuru kwekushanda nesimba uye nesimba raakaita."
Mr. Scott vanoshingairira uye vanofarira kuita bhizinesi reMelbourne nharaunda. Iye ari nhengo yeBhodi yeOceania Australia Foundation, Sachigaro weGeorges Mora Fellowship, Sachigaro weDhipatimendi reManagement uye Kushambadzira Advisory Board kuYunivhesiti yeMelbourne, uye akabata positon yaSachigaro weVatongi veMelbourne Awards kubvira 2016. Iye zvakare inhengo yeTariro Street Vechidiki uye Mhuri Services Corporate Advisory Board, Sachigaro weFinucane & Smith Advisory Board uye nhengo yeMelbourne Prize Trust Board.
Iye akabatsirawo nekutsvaga mari nekusimudzira kwevatambi vakawanda vakakosha munzvimbo yeMelbourne, senge Chunky Move Dance Company, Australia National Academy yeMimhanzi, Craft Victoria, Heide Museum yeazvino Art, The Australia Ballet, National Gallery yeVictoria, Victorian Opera, Monash Gallery yeArt, uye iyo Melbourne Symphony Orchestra.
VaScott vakapihwa zvakare neMenduru yeGoridhe Yekushanya kubva kugurukota rezvekushanya kuFrance nerubatsiro rwavakaita mukusimudzira kushanya pakati peFrance neAustralia. Akapihwa Accor's 2013 Silver Bernache muchikamu cheRuremekedzo / Zvemagariro Ekuremekedza, uye mu2015 yakaitwa inokudzwa nhengo yeLes Clefs d'Or Australia. Muna 2018, akaitwa nhengo yeBordeaux Wine Society uye akapihwa mubairo weBrolga neAustralia Dancing Society yemasevhisi kuDance Sport muAustralia.
Kunze kwaVaScott, vamwe mazana zana nemakumi mapfumbamwe veAustralia vakagamuchira iyo Queens Kudza.
Click pano yeiyo 2021 rukudzo runyorwa.